चीनसँग भीख होइन, प्रविधि मागौं – डा. बाबुराम
Home∕समाचार∕चीनसँग भीख होइन, प्रविधि मागौं – डा. बाबुराम
March 19, 2016 March 19, 2016 koselihk 0
गोरखाः पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति नेपालका नेता बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा बिप्पा सम्झौता गर्न आग्रह गरेका छन् ।
नयाँ शक्ति नेपालको जिल्ला समिति गठन गर्न गोरखा पुगेका भट्टराईले पत्रकारहरुसँगको भेटमा नेपालमा आधुनिक रेलमार्ग र सडक निर्माणका लागि चीनसँग पहल गर्न पनि उनले सुझाव दिएका छन् ।
‘सडकमार्ग र रेलमार्गको विस्तारमा पहिलो जोड हुनुप¥यो । चीन होस् वा कुनै मुलुकसँग हामीले अब भीख माग्ने हैन, पूर्वाधार र प्रविधि माग गर्नुपर्छ’, भट्टराईले भने, ‘मगन्ते प्रवृत्तिको अन्त्य गरी आर्थिक विकासको आधार बनाउने खालको सहयोग माग्नुपर्छ । बिप्पा सम्झौता गर्नु पनि उपयुक्त हुन्छ ।’
चीनसँग बिप्पा सम्झौता गरेमा विदेशी लगानी भित्र्याउन मद्दत पुग्ने उनले बताए । पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले चैतमा देशभरि संगठन बनाउनका लागि नगर संगठन र गाउँ संगठन निर्माण गरि वैशाखसम्म विधिवत केन्द्रीय समिति घोषणा गर्ने बताए । रासस
भूपालको निर्देशनमा ‘सपनीमा आउँने परी’
रसियामा बिमान दुर्घटना , ५९ जनाको मृत्यु